Danjiraha Midowga Afrika ee Somalia Maman Sidikou oo hambalyo u diray Ciidanka Soomaaliyeed | SAHAN ONLINE
Danjiraha Midowga Afrika ee Somalia Maman Sidikou oo hambalyo u diray Ciidanka Soomaaliyeed
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Dajire Maman Sidikou ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed 55-guurada ka soo wareegtay aas aaska ciidanka.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Danjiraha Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loogu hambalyeeyay guulaha ay ka soo hooyeen dagaalladii ay la galeen haraadiga Al-Shabaab.
War-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Soomaaliya ay ka saaraan kooxda Shabaab, isla markaana ay ku soo celiyaan xasilooni iyo kala dambeyn, iyadoo ay socoto howlo dib loogu dhisayo ciidamada qalabka sida.
“55 guurada ka soo wareegtay aas aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan ciidanka xoogga dalka uga mahadcelinayaa sida ay u xaqiijiyeen sugidda amniga iyo xasiloonida dalka, waxaan bogaadinayaa sida ay uga guuleysteen argagixisada Al-Shabaab” ayuu yiri Danjire Maman Sidikou.
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Dajire Maman Sidikou ayaa xusay inay sii wadayaan tababarida ay siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, si ay u xaqiijiyaan guud ahaan amniga dalka.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aas aasay 1960, iyadoo xilligaasi taliyaha ciidanka laga dhigay Allaha u naxariistee Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirsi.